Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Ayaa Si Rasmi Ah U Bilawday Diiwaan Gelinta Shaqaalaha Dawlada Hoose Ee Hargaysa – WARSOOR
Hargeysa (WARSOOR) – Munaasibadda daah-furka diwaangalinta shaqaalaha Dawlada Hoose ee Hargaysa ayaa lagu qabtay Dawladda Hoose, waxaana kasoo qeybgalay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda arrimaha gudaha, gudoomiyaha Hay’adda shaqaalaha dawladda, Maayarka Caasimada, Maayar ku-xigeenka,Xog-hayaha dawladda hoose, gudiga Hay’adda shaqaalaha, Agaasimaha Waaxda arrimaha bulshadda iyo masuuliyiin kale.
Maayarka Caasimadda Hargaysa, Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sotelco, ayaa oo soo dhaweeyay in maanta si buuxda loo bilaabo diiwaan-gelinta shaqaalaha Dawladda Hoose ee Hargaysa, gaar ahaana derajadda ‘A’ iyo ‘B’. Maayirka ayaa tilmaamay in diiwaan-gelinta shaqaalahu ay ka soo bixi doonto shaqo-abuurka ballaadhan ee ay Dawladda hoose u hayso shacabka bulshada.
Agaasimaha Waaxda Maamulka goboladda iyo degmooyinka ee Wasaaradda arrimaha gudaha, Maxamed Cali Maxamed, ayaa hay’adda shaqaalaha dawladda ku ammaanay hawshan, isaga oo usoo jeediyay in guud ahaanba ay hay’addu gaadhsiiso degmooyinka kale ee dalka.
Guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha dawladda Farxaan Aaddan Haybe oo isna halkaasi ka hadlay ayaa masuuliyiinta dawladda hoose uga mahad-naqay wada-shaqeyntii wanaagsanayd ee ay muujiyeen bilawgii hawsha iyo siday ugu heellanyihiin in la dhamaystiro oo ay si weyn u garab istaageen Hawl wadeenada Hay’adda Shaqaalaha Dawladda.
Gudoomiye Farxaan Aadan Haybe, ayaa sidoo kale sheegay in faa’iidooyinka laga dhaxli doono sugidda xogta shaqaalaha dawladaha hoose ay ka mid tahay, in la suggo xuquuqda shaqaale-nimo,tayaynta adeeg-bixinta ay dawladda hoose bulshadda u hayso Iyo in kor loo qaado aqoonta iyo kobcinta xirfaddeed ee shaqaalaha dawlada hoose.
Wasiir ku xigeenka Wasaraadda Arrimaha gudaha, Cabdinaasir Caydiid Maxamed, ayaa ku war-geliyay Maayaradda 23-ka degmo doorasho ee dalka oo dhan inay hawshan laga qaban doono inta lagu gudo jiro sannadkan 2021-ka, isla-markaasna ay muhiim tahay inay Maayaradda dalku si buuxda ugu diyaargaroobaan hawshaasi.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo heshiis lagu taageerayo Isbitaalada la saxiixatay Talyaaniga